कठमाडौँ । राजश्व अनुसन्धान विभागले झुट्ठा र नक्कली मूल्य अभिबृद्धी कर बिजक प्रयोग गरी राजश्व चुहावट गर्ने २ फर्म बिरुद्ध ४० करोड ६१ लाख बिगो दाबी सहित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका २५ मा रहेको न्यू सागर प्लास्टिक …
‘पैसा छैन देश कसरी चलाउने ?’ भन्दै आएका अर्थमन्त्रीलाई राहत, जनताले २४ अर्ब कर तिरिदिए
काठमाडौं । बन्दाबन्दी (लकडाउन) खुकुलो भएसँगै राजस्व संकलन तीव्र भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुने अन्तिम महिना असारका ११ दिनको अवधिमा मात्रै २४ अर्ब बढी राजस्व संकलन गरेको छ । तीन महिनाको लगातारको लकडाउनका कारण अत्यन्तै न्यून राजस्व …
मदिराजन्य वस्तुको ओसारपसार र खपत कम हुँदा १८ अर्ब अन्तःशुल्क घट्यो
चितवन । कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि लकडाउनको बाध्यतासँगै मदिराजन्य वस्तुको ओसारपसार र खपत घटेपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले लक्ष्य लिएको भन्दा रु १८ अर्ब १२ करोड ८४ लाख अन्तःशुल्कमा गिरावट आएको छ । यस कार्यालयले जेठ मसान्तसम्ममा अन्तःशुल्कमा मात्र रु ३६ अर्ब चार करोड …
कीर्तिपुर नगरपालिकाले लिंदै आएका कर आगामी आर्थिक वर्षमा नबढाउने
किर्तिपुर । कोभिड–१९ का कारण स्थानीयवासीलाई असर पर्ने जनाउँदै कीर्तिपुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नगरपालिकाबाट लिइँदै आएको कर नबढाउने भएको छ । कोरोना भाइरसलाई ध्यानमा राख्दै नगरपालिकाले कुनै करको दर नबढाई यथावत् राख्ने निर्णय गरेको राजश्व परामर्श समितिले जनाएको छ । परामर्श …
चैतसम्मको कर तिर्ने बैंकर्सको निर्णय, कति उठ्छ राजश्व ?
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले चैत मसान्त अवधीसम्म्को कर तिर्ने निर्णय गरेको छ । बिहिबार बसेको बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको बैठकले चैत मसान्तसम्मको कर तिर्ने समझदारी गरेको हो । सरकारलाई दैनिक खर्च धान्न समेत अप्ठेरो परेकाले चैत मसान्त अवधीसम्मको कर तिर्ने समझदारी …
‘सक्ने उद्यमीहरुले राजश्व बुझाएर सरकारलाई सहयोग गर्नुस्, नसक्नेहरुको समस्या सरकारले सुनोस्’
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सक्ने उद्यमी व्यवसायीहरुले राजश्व बुझाएर सरकारलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेका छन् । उपाध्यक्ष गोल्छाले आज ट्वीट गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनले ट्वीटमा लेखेका छन्– ‘मेरो आग्रह सक्ने उद्यमी व्यवसायी साथीहरुले राजश्व …
धुलिखेल नगरपालिकाले व्यवसायीलाई लकडाउन अवधिको कर छुट दिने
काठमाडौँ । धुलिखेल नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका व्यावसायीसँग लकडाउन अवधिको कर नलिने भएको छ । नगर कार्यपालिका बैठकले लकडाउन अवधिभरको नगरका सबैखाले व्यवसायीलाई कर छुट दिने निर्णय गरेको हो । पर्यटन, उद्योग तथा व्यापार व्यवसायीसँग लकडाउन अवधिभरको कर छुट गरिएको नगरप्रमुख अशोक ब्याञ्जूले बताएउनले …
लकडाउन अवधिमा विभागले जरिवानावापत संकलन गर्यो रु दुई करोड राजश्व
काठमाडौँ । बजार अनुगमनको जिम्मा पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बन्दाबन्दी अवधिमा रु दुई करोड बराबरको राजश्व संकलन गरेको छ । गत चैत ११ देखि जेठ २८ गतेसम्मको तथ्यांकनुसार अनुचित व्यापारिक कारोवार गर्ने पसललाई कारवाहीस्वरुप जरिवाना गर्दा रु एक करोड ६५ …
‘दुई सय फर्मले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी १२ अर्बको कारोबार गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ’
काठमाडौं । राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले करिव दुई सय फर्मले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी १२ अर्बको कारोबार गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको बताएका छन् । कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले त्यसमध्ये केहीविरुद्दा दायर गरिसकेको र बाँकीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको बताएका …
‘असार ७ भित्रै कर उठाउन पाइयोस’ भन्दै सरकार गयो सर्वाेच्च अदालत
काठमाडौं । असार ७ गतेभित्रै कर उठाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै सरकारले सर्वाेच्च अदालतमा पनुरावलोकन निवेदन हालेको छ । अर्थ सचिव शिशिर ढुंगानाले आन्तरिक राजश्व विभागले दिएको समय अवधी अर्थात असार ७ गतेभित्रै सम्पूर्ण कर उठाउन पाउनुपर्ने दावी सहित सर्वोेच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवदेन हालेको …
आन्तरिक राजश्व विभागलाई सर्वोच्चको आदेश-‘असार ७ गतेसम्म कर बुझाउने सूचना कार्यान्वयन नगर्नू’
काठमाडौँ । आन्तरिक राजश्व विभागले असार ७ गतेसम्म कर बुझाउन जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीलगायतले दायर गरेको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र मनोज शर्माको संयुक्त इजलाशले उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम …
विद्युतीय गाडीको कर घटाउने संकेत, बहस गरौं न– अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनको कर घटाउने संकेत गरेका छन् । उनले पेट्रोलियमका सवारी साधनको भन्दा विद्युतिय सवारी साधनको कर कम हुनुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको पनि स्पष्ट पारे । विनियोजन विधेयकमाथीको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री डा. खतिवडाले तर …